Bentley Systems kwuputara OpenSite Designer - Geofumadas Ugbu a dị
Mee, 2019 innovations, Microstation-Bentley
Naanị ihe na-eme ka ịme ihe ngosi nke eziokwu, njikarịcha na nnapụta ngwa ngwa iji mee ka ọganihu nke ejima dijitalụ rụọ ọrụ maka ndị na-arụ ọrụ obodo.
Bentley Systems, Incorporated, ndị na-enye ụwa niile ngwanrọ ngwanrọ na ọrụ ejima dijitalụ iji kwalite nhazi, mmezi ihe na akụrụngwa, taa mara ọkwa nnweta OpenSite Kere, ngwa ngwa ya maka ngwa oru nke ọrụ obodo na mmepe obodo mepere n'oge usoro ihe omuma, usoro mbu na ihe omuma. OpenSite Kere akwalite BIM iji zuru 3D saịtị imewe, ekpuchi ezi uche 3D ịme ngosi uwe saịtị ọnọdụ si oyiyi nke drones na-enyocha kwa, geotechnical analysis, teren ịme ngosi uwe, nkewa na saịtị na optimizing leveling, ịme ngosi uwe na analysis nke mmiri mmiri na-asọ asọ, nhazi nke ọrụ ntanetị, mmepụta ihe osise zuru ezu na ihe ngosi nke ihe nkiri.
OpenSite Kere na-enye ohere ngwa ngwa na ugboro ugboro na-emepụta ihe, na-eji ihe ọmụma ndị dị na gburugburu site na isi ígwé ojii, 3D meshes, GIS na isi mmalite ndị ọzọ iji ghọtakwuo ọnọdụ dị na saịtị ahụ. Njikọ na geotechnical engineering solutions PLAXIS na SoilVision Bentley na-enyere aka melite atụmatụ saịtị na ihe omuma gbasara banyere ala ala, gụnyere ike, nrụgide na mwepụ.
con OpenSite Kere, ndị ọrụ nwere ike ịmepụta ụdị 3D nwere ọgụgụ isi ndị nwere ozi saịtị, data ntanetị, ọdụ ụgbọ ologbo, ụlọ maka ụlọ, ohere, ụzọ ụzọ, nkata atụmatụ na ihe ndị metụtara ọrụ ahụ. N'ime nhazi nke mbido, onye injinia ihe owuwu nwere ike mezue ma mee ka ndozi ya di nma, mgbe o na - eme ihe n 'azu nke oma, nke na - anabata mgbanwe mgbanwe. Iji mezuo ọrụ dijitalụ nke ọrụ ahụ, OpenSite Kere zuru oke na-akwado nhazi zuru ezu nke nhazi ihe owuwu, gụnyere mmepụta nke ihe mgbapụta niile.
Nye ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ, OpenSite Kere ga ụgbọala imewe nke obodo ọrụ na-aga site omenala profaịlụ ewepụghị na 2D a 3D ịme ngosi uwe na gburugburu ebe obibi, huu ihe oru oma geospatial data analysis haịdrọlik, geotechnical na earthworks. OpenSite Kere, nke na-ejikọta njikarịcha nyocha nke nkà na ụzụ SITEOPS nke Bentley, bụ onye na-anọchite anya ike ịrụ ọrụ nke PowerCivil, topoGraph, GEOPAK Site, Site InRoads y MXSite nke Bentley.
"Mmekọrịta nke ọrụ dijitalụ na-arụ ọrụ nke na-ejikọta nyocha na nkwekorita na nhazi na nṅomi na-egosipụta na ọhụrụ anyị OpenSite Kere. Anyi nwere obi uto ka anyi nweta ihe nghota zuru oke maka oru nke oru na mmepe obodo iji mee ka ndi oru injinwu megharia. Dustin Parkman, onye isi oche, ntinye nke mmepụta ihe eji eme obodo na Bentley Systems.
"Na Langan, anyị na-achọ mgbe niile ohere iji mee ka anyị mara onwe anyị site na asọmpi ahụ maka mmabe na ahụmịhe anyị. N'ime oge atụmatụ, anyị ejiri SITEOPS mee ka saịtị ahụ dị elu, nyochaa mmegharị ụwa ma chọpụta ego. Ugbu a anyị na-atụ anya iji OpenSite Kere iji mepụta atụmatụ anyị na akwụkwọ. " Michael Semeraro, Jr., PE, PP, njikwa onye mmekọ, EVP, Langan International.
Na okwu nke Greg Bentley, CEO nke Bentley Systems: "Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na, mgbe afọ iri atọ gachara ọganihu na nchịkwa ndị gọọmentị, njedebe na Onye Okike OpenSite, ihe ngwa ngwa na ngwa di mkpa nke na-agwakota mmezi zuru oke maka ebumnuche na enweghi ike inweta ya ma o bu okwenye. N'ezie, ọ na-eme ka ihe anyị weere dị ka àgwà dị oke mkpa nke ejima nke ejiri ihe di iche iche: ihe doro anya nke ihe oyiyi ahụ, eziokwu nke nyocha na njikarịcha na ikwesị ntụkwasị obi na ebumnuche nke imewe na nyocha niile. Nlekọta ọrụ nke ndị na-ewu ihe owuwu na atụmatụ aghụghọ ha ga-erite uru dị ukwuu site n'ọganihu dị ukwuu nke OpenSite Kere. Egbula oge ịnwale ya! "
Ozi ndị ọzọ banyere OpenSite Kere.
Bentley Systems bụ na-eduga zuru ụwa ọnụ na-eweta nke mbara software ngwọta maka engineer, architects, geospatial ọkachamara, constructors, na nwe-ahụ maka ọrụ, na Aims na-akwalite imewe, ewu na akụrụngwa arụmọrụ. BIM na injinịa ngwa dabeere MicroStation si Bentley, na ọrụ digital ejima na ígwé ojii, mbanye ngo mmejuputa (ProjectWise) ma laghachi na akụ (AssetWise) iga ndị ọha na eze ọrụ, utilities , ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmahịa.
Bentley nwere ihe karịrị 3.500 ọrụ, ihe karịrị 700 nde ke kwa afọ revenue na 170 mba na site 2014, ọ ka nyekwara karịa 1.000 nde ke nnyocha, mmepe na mbụ. Kemgbe ọ malitere na 1984, ụlọ ọrụ ahụ nọgidere n'aka ndị isi ise ya, ụmụnna Bentley. Bentley na-arụ ọrụ site na ịkpọ òkù na ahịa NASDAQ nzuzo. www.bentley.com
Previous Post«Previous Usoro zuru ezu nke usoro BIM
Next Post Nzukọ GIS efu - Mee 29 na 30, 2019Next »